Zviitiko Mukutenga Yekushambadzira Yekushandisa Platform | Martech Zone
Zviitiko Mukutenga Yekushambadzira Yekushandisa Platform
China, December 29, 2016 Douglas Karr
Kune akawanda kushambadzira otomatiki masystem kunze uko… uye mazhinji acho anozvitsanangura se marketing automation ine mwero wakasiyana wezvinhu chaizvo zvinoitsigira. Zvakadaro, isu tinowona sekugadzira kunoita makambani mazhinji zvikanganiso zvakakura mune chero kushandisa mari yakawandisa, nguva yakawandisa kana kutenga mhinduro isiri iyo zvachose.
Yakananga kushambadziro tekinoroji, isu tinogara tichibvunza mibvunzo mishoma mune yevatengesi sarudzo yekuita:
Ndeupi mukana unoona izvo hazvisi kutorerwa mukana? Kukura kunotungamira here? Kugovera kunotungamira mukuwedzera kugona kwekutengesa? Kubatsira upsell kana kuchengetedza vatengi vemazuva ano? Kana kuti kuri kungodzora kuwanda kwebasa rechikwata chako uye kugadzirisa mamwe emanyorerwo echinyorwa iwe auri kuendesa parizvino.
Ndeipi nguva unofanirwa kuita uye kuona mhedzisiro? Unoda kukurumidza sei kumuka uye kumhanya kuti uone kudzoka pane yako mari? Ndeipi iyo break-even poindi yekuzivisa kubudirira?
Ndezvipi zviwanikwa iwe unoda kuitisa uye kubata iyo system? Ichi chihombe! Iwe unofanirwa here kuita persona research? Iwe unofanirwa here kuvandudza vatengi nzendo kubva pakutanga? Iwe unoda here kuti utange kuvandudza ako wega anoteerera emaema matemplate? Iko kusanganisa kwakagadzirwa kuchashanda here kana iwe unofanirwa kuwana imwe yekuvandudza kuti uwane mhedzisiro yaunoda?
Ndeipi data iwe unofanirwa kutanga uye uchaita sei kuti unyatso famba uye nekugadzirisa dhizaini rwendo rwevatengi sehunhu, kutenga, uye imwe data inogadziriswa? Iyo isiriyo system uye iwe unowana zviwanikwa zvako zvaomeswa uchingoyedza kushandura uye kurodha dhata pakati pesystem.
Ndeipi mari unogona kugadzira? Haisi kungopa marezenisi papuratifomu, mari yekutumira mameseji, sevhisi, uye rutsigiro, kuvandudza zvemukati, kubatanidza pamwe nemari yekuvandudza, pamwe nekumisikidza, kugadzirisa, kuyedza uye nemitengo yekugadzirisa.
Semutemo wechigumwe, tinokumbira vatengi vedu kunyora mepu nzendo dzevatengi vavo:
kutora - Kune chimwe nechimwe chigadzirwa uye sosi yega yekutungamira, nderupi rwendo rwunotorwa netarisiro kuti uve mutengi? Sanganisira zviwanikwa zviwanikwa, zvivakwa zvekutumira, uye zviwanikwa zvepamhepo. Iwe unozogona kuona kuti ndeapi maitiro ari iwo anonyanya kushanda, kutyaira yakawanda mari, uye kudhura mashoma mari. Iwe unogona kuda kushandisa kushambadzira otomatiki kuti uwedzere vhoriyamu yeakanakisa kana kushandura maitiro eayo asingabatsiri asi anobatsira marwendo.
Kuchengeta - Kune chimwe nechimwe chigadzirwa, nderupi rwendo rwunotorwa nemutengi kugara kana kudzoka semutengi? Kushambadzira otomatiki masisitimu anogona kuve anoshamisa maturusi ekuwedzera kuchengetedza. Iwe unogona kuendesa paneboarding mishandirapamwe, yekudzidzira mishandirapamwe, inotangisa mishandirapamwe inoenderana nekushandisa, uye zvimwe zvakawanda. Usatarisira pasi kuti mapuratifomu anogona sei kukubatsira iwe mukati kuchengeta vatengi vakakura.
upsell - Iwe unogona sei kuwedzera kukosha kwevatengi kuchako chako? Pane zvimwe zvigadzirwa kana mikana? Iwe unogona kushamisika kuti vangani vatengi vauinazvo vari kushandisa mari nevanokwikwidza nekuti ivo havana kana kuziva izvo zvaunofanira kupa!
Mukati merwendo rwese, ikozvino mepu kunze:
Vashandi neMitengo - Ndedzipi mitengo dzevatengesi vako nekutengesa kuti uwane mumwe mutungamiriri anokwanisa uye mutengi wega wega?
Sisitimu uye Mari - Ndeapi masisitimu anounganidzwa data munzira?
Mukana uye Revenue - Ndezvipi zvinangwa zvekukura kune imwe neimwe rwendo uye kuti yakawanda sei mari inowanikwa inogona kuwanikwa kuburikidza nekugadzirisa uye kugadzirisa iwo marwendo? Iwe ungatoda kufungidzira izvi - 1%, 5%, 10%, nezvimwewo kungo fungidzira mukana wemari. Izvo zvinogona kukupa iwe bhajeti kururamisa kuti uite kuiswa.
Iwe unogona kuda kutsvagisa mamwe makambani muindastiri yako uye woongorora mashandisiro emakesi kubva kune vamwe vekushambadzira automation vatengesi. Rangarira izvi, zvakadaro, kushambadzira otomatiki mapuratifomu haashambadze kuita kune njodzi - chete anoshamisa iwo! Tora manhamba ane tsanga yemunyu paunenge uchishanda kuti uwane chaiko chikuva.
Mune mamwe mazwi, usati wambotenga chikuva, iwe unofanirwa kuve uine ako ese marongero akaiswa uye akagadzirira kuita! Zvakawanda sekuvaka imba… iwe unofanirwa kuve nemapurani pamberi iwe sarudza maturusi, vavaki, uye zvekushandisa! Kana iwe ukabudirira mepu mazano ako, iwe unogona kuyedza yega yega yekushambadzira otomatiki chikuva uchipesana neiyi zano kuti uone mapuratifomu kwaungangobudirire. Isu tinoona kumwe kukundikana nemakambani anotenga chikuva uye edza kuchinjisa maitiro avo kuti agone kutadza kwepuratifomu. Iwe unoda chikuva icho chinonyanya kuvhiringidza uye chinonyanya kugara kune zviwanikwa zvako, maitiro, tarenda, nguva, uye inotevera kudzoka pane investment.
Tinogona kukurudzira zvikuru kusvetuka kukumbira yako chikuva kuitira mareferenzi uye ingo enda online kutsvaga vatengi. Sezvo nezviitiko zvekushandisa, mareferenzi anowanzo sarudzwa nemaoko uye vatengi vanobudirira kwazvo. Iwe unoda kusvika uye kubvunzurudza wepakati mutengi kuti uone kuti ndeipi nhanho yebasa, rutsigiro, marongero, kusangana, uye hunyanzvi yako yekushambadzira otomatiki chikuva iri kuvapa ivo. Ziva kuti iwe uchanzwa dzimwe dzinotyisa nyaya - yega yega yekushambadzira otomatiki chikuva anazvo. Enzanisa zviwanikwa zvako uye zvinangwa kune yega yega mareferenzi ako kuti utonge kana kwete izvo zvinogona kufanotaura kubudirira kwako kana kukundikana.
Isu tanga tine mumwe mutengi kubatanidza uye kushandisa matanhatu-manhamba chikuva zvinoenderana chete neyavo muongorori quadrant. Apo chikuva chaive yakagadzirira kuvhura ivo vaive vasina zano, vasina zvemukati, uye vasina nzira yekuyera kubudirira kwemakampeni chaiwo! Ivo vakafunga zvechokwadi kuti vaizove nemimwe mishandirapamwe yemushandira papuratifomu iyo yavanogona kugadzirisa zviri nyore nekutumira… kwete. Iyo chikuva chakatangwa sehombodo isina chinhu.
Iko kusangana neplatifomu kwanga kusisina chero zviwanikwa zviwanikwa, chero, ingori vatengi rutsigiro kune mukushandisa chikuva. Kambani iyi yaifanirwa kuenda kunotsvagira vatengi vavo tsvagiridzo, vachihaya vanachipangamazano kuti vabatsire kusimudzira nzendo dzevatengi, vozoshanda nevanoongorora kuchengetedza nekuvandudza mishandirapamwe. Vakashamisika kuti mutengo wekuvandudza nekuita mishandirapamwe yekutanga wakafukidza hunyanzvi hwese hwekushandisa.
Tags: kutoramarketing automationkuchengetwaupsellmutengesi sarudzo
Kutungamira Dhijitari Yekushambadzira Chikwata - Iwo Matambudziko Uye Maitiro Ekusangana navo
Ndatenda nemazano aya, ese akakosha. Kushambadzira otomatiki kunogona kuunza mhedzisiro yakanaka, asi vatengi vanofanirwa kuziva kuti chishandiso uye hachishande pasina zano uye zvirimo. Ndicho chikonzero nei zvakakosha kusarudza chikuva chinopa tsigiro yakaoma mukumisikidza mishandirapamwe. Ndinoda kukurudzira Synerise, inova chikuva chakadaro. Vatengi havangowani mukana kune ese maficha, asiwo kudzidziswa, rubatsiro uye matipi.